Lexie Lu Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Lexie Lu
Lexie Lu ndeye wega freelance UX dhizaini uye blogger. Iye anochengeta pamwe neazvino webhu uye UX dhizaini maitiro uye anogara aine mukombe padyo padyo. Anonyora pamusoro Dhizaini Kugadzira uye inogona kuteverwa pa Twitter @lexieludesigner.
10 Akakosha Matipi eNovice Vatengesi
Chipiri, January 17, 2017 NeChishanu, Gumiguru 2, 2020 Lexie Lu
Saka wagadzirira kucheka mazino ako mukumhanya-mhanya, inonakidza nyika yekutengesa. Kuzvikurudzira pachako pasina mubvunzo kwakakosha, asi iwe unodawo kugamuchira kune yakaedzwa-nguva-mazano uye unzwisise maitiro ekuishandisa pane ako mabasa uye nharaunda yekushanda. Ramba uchiverengera mapfumbamwe anonongedzera ayo anokubatsira iwe kuti uwane, ukure uye ubudirire uri muindasitiri yekushambadzira. Iva Inquisitive - Nguva dzose edza kutarisa mamiriro ezvinhu, matekinoroji, uye maitiro nechinangwa che